BBC Somali - Warar - UN oo Siri Lanka ka saartey "liiska ceebta"
UN oo Siri Lanka ka saartey "liiska ceebta"
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 12 June, 2012, 10:48 GMT 13:48 SGA
Qaramada Midoobey ayaa amaantey Sri Lanka
Qaramada Midoobey aya dalka Sri Lanka ka saartey liiska ceebta ee waddamada ku xad-gudbo carruurta.
Dalka Sri Lanka waxa uu mar caan ku ahaa askareynta carruurta iyo in loo adeegsado dagaalladda.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa haatan sheegay in dowladda dalkaasi ay sameysey dadaalada xooggan oo wax loogu qabanayo arrintaasi.
Dowladda waxaa kale oo la sheegey in ay daba-gal ku sameysey carruur gaareysa ilaa 1400 oo la la’yahay halka ay ku dambeeyeen.
Ban Ki Moon ayaa sidoo kale sheegay in UNICEF iyo xukuumada Sri Lanka ay si wadajir ah uga shaqeynayeen sidii dib loogu mideyn lahaa xubnaha qoysaskii kala lumay ee waqooyiga Sri Lanka. Sri Lanka waxaa muddo dheer ka socdey dagaal sokeeye, iyadoo dowladda ay woqooyiga dalkaasi kula dagaalameysey jahadii Tamil Tigers.
Ciidamada Militariga dalkaasi ayaa la sheegey inay faarujiyeen dhowr dugsi oo ay horey xerooyin ugu dhigteen, balse waxa walaac laga muujiyay in weli ay ku harsanyihiin 15 dugsi.